I-Cowboy Cabin eneminyaka eyi-100
Woza uzozibonela i-Old West njengoba ihlala edolobheni elincane laseDubois. Sitholakala kumamayela angu-2 ukusuka edolobheni, endlini yezingodo eyimfihlo futhi ethokomele yeminyaka eyi-100. Ngaphambili-ibanga elide, eliyimfihlo le-Wind River elihle kakhulu ekudobeni i-trout. Izingane (kanye nengane kuwe) zizothanda ukugibela isondo lokushwibeka nokugazinga ama-marshmallow phezu komgodi womlilo.
Siyakwamukela eNtshonalanga. Into yokuqala ozoyiqaphela, ngemva kokuhlala endlini, ukuthula okunomsindo. Futhi kulokho kuthulile uzoqala ukubona izilwane zasendle phambi kwendlwana. Ungase ubone umhlali wethu oMkhova Omkhulu Onezimpondo noma Ukhozi Olunempandla egida i-Osprey ye-Brown Trout amamitha angu-100 ukusuka kudeski. Sicabanga ukuthi kuthatha izinsuku ezimbalwa ukuphumula kulo mhlaba, futhi ngenxa yaleso sizathu, kanye ne-COVID, sidinga ukuhlala okungenani kwezinsuku ezi-5.
Ikhabhinethi ineminyaka eyi-100 ikhona— ibuyekezwa ngezinsiza zesimanje. Ikhishi njengamanje lenziwa lesimanjemanje (akukho zithombe okwamanje) ngomshini wokuwasha izitsha nokulahlwayo. Kunamakamelo ama-3, ngalinye lihlukaniswa ngeminyango ye-accordion. Igumbi lokulala eliyinhloko elinebhavu le-en-suite linombhede onethezekile, wendlovukazi, i-IKEA duvet, namashidi kakotini angu-100%. Ikhishi/igumbi lokudlela linetafula elingamamitha angu-7 lokhuni olubuyisiwe, elilungele izilwane zasendle ezibuka ngaphambili ngesibonakude, esikunikeza khona, noma ukubopha izimpukane ohambweni lwakho lokudoba oluqondisiwe.
Ikhishi linazo zonke izinto zokupheka ezidingekayo, ezihlanjululwa phakathi kwabaqashi, i-toaster, umenzi wekhofi nge-Wind River Coffee, izinongo nezincwadi zokupheka. Igumbi le-TV elehlayo linosofa ophelele ogoqiwe kanye nesitofu sokhuni esihle esinomlilo obekwe ngaphambi kokufika. Ikhebula ne-inthanethi enhle kakhulu, kunjalo. Igumbi ngalinye kulawa lingavalwa ngaphandle kwamanye. Ukwengeza, kukhona igumbi elincane lokuwasha elinewasha nokomisa nazo zonke izinsipho ezidingekayo nezinto ezithambisayo. Idekhi engaphambili iyindawo ekhethekile yengilazi yewayini kusihlwa noma kwasekuseni ngaphambi kokuhlola nsuku zonke. Futhi ezinganeni kunendawo yokucima umlilo ngasemfuleni enentambo ejingiwe eduze.
Indawo yonke icishe ibe ngamamitha-skwele angama-750 futhi iwubukhazikhazi kubantu abangu-2, ikhululekile impela emndenini wabantu aba-4, futhi ihlalisa abantu abayi-6 abangadingi ubumfihlo obuningi. Sikhokhisa u-$15 ubusuku ngabunye ngombhede wesithathu (i-IKEA enosayizi ogcwele) ozolethwa ekhishini/egumbini lokudlela. Futhi sicela usitshele ukuthi udinga imibhede emingaki.
Izivakashi eziningi zenza uhambo losuku oluya e-Yellowstone, Grand Teton kanye nedolobha elimatasa, elicwebezelayo lase-Jackson. Eduze kwasekhaya, i-Dubois ine-charm ye-Western Town yama-1950. Futhi kulabo abafuna ukuphuma baye emvelweni-amathuba awapheli. I-Whisky Basin, amamayela angu-10 ukusuka kukhabhinethi, inokubukwa kokuqwala izintaba zeqhwa, ama-petroglyphs, imifudlana ye-trout, futhi ebusika, i-Bighorn Sheep. I-Badlands, imayela eli-1 ukusuka emnyango wethu, ivuleleka kumakhilomitha ayi-10 emaweni apendiwe ngaphambi kokufika eziNtabeni zase-Absaroka. Ukugibela amahhashi kungahlelwa ku-Painted Hills. Ubungeke wenze iphutha ngokuhlala lapha.
Simema izihambeli ukuthi zisitshele ukuthi yiziphi izintshisekelo zazo ezikhethekile ukuze zishiye ulwazi olufanele kukhabhinethi lapho zifika
Ikhabhinethi iyi-oasis yemvelo imizuzu emihlanu ukusuka edolobheni laseDubois. Imindeni yaseCanada Amahansi akhulisa amazinyane awo egcekeni nasedlelweni kwamakhelwane. Ama-Bald Eagles, ama-Sandhill Cranes, izimpungushe noquqaba lwezinyamazane zizulazula egcekeni kanye nomfula ngaphambili. I-Petroglyphs, ukuhamba ngezinyawo, ukudoba kanye nokuhamba kwezintaba kungaphakathi kwamamayela ayi-10. I-Yellowstone ne-Grand Teton wuhambo losuku, njengo-Jackson Hole, i-glitzy cowboy i-Mecca. Abagibeli bamabhayisikili awela izwe bayama ebusuku edolobheni, kanye nabafana bezinkomo banamuhla, bemanzisa ulwanga lwabo ngemva kosuku olude amahhashi agijima. I-Dubois iyinambitha yasentshonalanga endala.
Asibona abaqondisi bokudoba, kodwa njengoba sindiza izinhlanzi izinsuku eziningi, siyatholakala ukuze sabelane ngalokho okusisebenzelayo. Umyeni wami uyazamukela izingxoxo zokudoba futhi mina, ngokwami, ngigcwele iziphakamiso. Kodwa kuphela uma ubuza. Sihlala ngaphesheya komgwaqo (cishe amayadi angu-150) futhi silungele ukusiza lapho sidingeka. Noma cha!
Asibona abaqondisi bokudoba, kodwa njengoba sindiza izinhlanzi izinsuku eziningi, siyatholakala ukuze sabelane ngalokho okusisebenzelayo. Umyeni wami uyazamukela izingxoxo zokudoba…